COVID 19 FAQS | ACADEMIC
COVID-19 FAQS for Virtual Classroom
COVID-19 ကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ?
Vritaul Classroom သည် COVID-19 ကဲ့သို့ ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ကပ်ဆိုးရောဂါဆိုးနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမှ ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက် အွန်လိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်၍ LMS စနစ်ဖြင့် သင်ကြားသင်ယူနိုင်ခြင်းကြောင့် အလိုအလျောက် Social Distancing ဖြစ်နေပြီးသား ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကူးစက်ရန်အခွင့်အရေးကို အကောင်းဆုံး ကျော်လွှားနိုင်သော စာသင်ခန်းဟု ဆိုရပါမည်။
အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူများ ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲများကို အလွယ်တကူ သိရှိ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ သုံးစွဲသူများအတွက် လက်စွဲစာစောင်များ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဓာတ်ပုံများဖြင့် စနစ်တကျ ရှင်းလင်းဖော်ပြလမ်း ညွှန်ပေးသွားပါမည်။
ယခင်ကကဲ့သို့ ပုံမှန်အနေအထားပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်တွင် Virtual Classroom များ၏ ရည်တည်မှုက မည်သို့ဖြစ်သွားနိုင် သနည်း?
ယခင်က ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် အိမ်မှ ကျောင်း၊ ကျူရှင်များ၊ စာသင်ဝိုင်းများဆီသို့ အချိန်ပေး၍ သွားရောက် သင်ယူကြရပါသည်။ အချို့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ရပ်ဝေးဒေသရှိ ပုဂ္ဂလိက စာသင်ကျောင်းများသို့ သွားရောက်လေ့လာဆည်းပူးသင်ယူကြရပါသည်။ အချိန်၊ ငွေကြေး၊ ကုန်ကျစရိတ်အား သုံးစွဲသူကိုယ်တိုင် နှိုင်းဆကြည့်လျှင် ပိုမို ထိရောက် သက်သာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါမည်။
ပုံမှန်အနေအထားပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည့်တိုင် Virtual Classroom အတွင်း သင်ကြားသင်ယူရမှု၊ နည်းပညာနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းကျင်မှုများရှိရန် လိုအပ်သော သတင်းနည်းပညာခေတ် (ICT Age) ရောက်ရှိနေသည်ကို သတိထားကြရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအလေ့အကျင့်ကောင်းသည် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ၏ အနာဂတ်ပညာရေးအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့်ပါ ချိတ် ဆက်နိုင်မည့်အကြောင်းကိုလည်း သတိချပ်သင့်ပါသည်။